Automotive Parts paaivaumba
Electric Parts paaivaumba
Medical Plastic jekiseni
Pipe Fitting Kuumbwa
Plastic Cap paaivaumba
One Stop Plastic jekiseni Mould uye Manufacturing Service
Chinese Best Plastic Mould Manufacturer (CBPMM) ndiye aitungamirira Chinese kambani kushandisa mumunda epurasitiki jekiseni muforoma uye kugadzira mabasa. We dzakatangwa mugore ra2003 uye akavhiyiwa dzedu dzinobva kubva Shanghai, China. Tinotevera zvachose unhu maitirwo ezvinhu operative zvinodiwa izvo kuti tive mumwe yakanakisisa uye tiite yepamusoro basa rubatsiro mu China.
Image Box chinyorwa
CBPMM inoomerera dzakawanda unhu mitemo uye ane ISO 9001: 2005 advertising inova anoratidza yedu yepamusoro vimbiso.
Tinopa hwakasiyana-siyana zvigadzirwa kuti vatengi izvo zvinosanganisira purasitiki jekiseni kuumbwa motokari kuumbwa purasitiki muforoma kugadzira, bhodhoro chivharo kuumbwa zvemagetsi muforoma kugadzira, kufa vachikanda, musha midziyo yemagetsi chakuvhuvhu, zvokurapa muforoma kugadzira, uye nyere muforoma kugadzira.
Tinoshandisa matsva uye mamiriro-of-nounyanzvi michini uye kugadzirwa pezvakaitwa kuitira zvakanakisisa zvigadzirwa vedu vaikoshesa vatengi. CBPMM anogona kugadzira zvigadzirwa kuti zvinodiwa chaizvo mutengi uye anogona kuwana nayo wakakumikidzwa kwavari nokukurumidza.
We take pride in our highly qualified, trained, and efficient workforce. We are capacitated to meet the quotas within 24 hours and can provide the sample of the plastic mold to the customers within memazuva 3-5 .
The chikwata nyanzvi pana CBPMM zvikuru vakadzidziswa uye nhaka zvakakwana competencies kunzwisisa zvinodiwa vatengi mumunda epurasitiki jekiseni Kuumbwa uye aritore akanunura mukati mavhiki maviri.
Vatengi vanogona kuvimba kwedu chaizvo kubasa kusangana dzavo customized kuitira mukati waiti wava.
Tinewo kunzwisisa makwikwi uye mutengo sensitiveness mapurasitiki muforoma kugadzira bhizimisi uye somugumisiro, isu mutengo zvigadzirwa edu competitively. Tinotenda pakupa yepamusoro zvigadzirwa kuti vatengi vedu panguva musoro mitengo kuvaka nokuriritira-refu ukama navo. Inongova rokutengesa havasi chinangwa chedu chikuru, asi isu pfungwa pave chiriporipocho uye kugamuchirwa vatengi.
CBPMM iri vakazvipira kuunza mutengi kugutsikana izvo zvichatibatsira kuramba uye kukura kwedu vatengi chawo.
Medical Part Mould
Mutopota Fitting Mould
Bottle Cap paaivaumba
Home Appliances Kuumbwa
Motorcycle Parts paaivaumba
Mapurasitiki muforoma kugadzira indasitiri zvikuru mitengo kugumbuka. Pricing chinokosha determinant nokuda kufurira mutengi wacho kutenga chisarudzo. Tinonzwisisa izvi indasitiri emuchina uye nesimba Pricing uye nokudaro isu zvinopa akanakisisa mitengo kusvika vatengi.
We kudzibayira pakutanga fekitari mitengo zviri zvikuru nemakwikwi kupfuura vakwikwidzi. Kwete chete vari zvigadzirwa yedu chaizvo competitively akatemerwa mutengo, asi ivo vari uyewo chaizvo yepamusoro. Izvi zvinoita dzakanakira wemishonga yepamusoro zvigadzirwa akatemerwa mutengo panguva yemakwikwi chaizvo mitengo izvo zvinotibatsira kusiyanisa isu pamwe makwikwi.
Pricing yedu kunoita kuti akakurumbira pakati vatengi uye kunotibatsira kuramba pamberi vakwikwidzi.
CBPMM anoshandisa ichangoburwa uye mamiriro-of-nounyanzvi michini uye kugadzirwa enyika. The ano midziyo yaishandiswa kunovimbisa kunaka zvinhu zvedu. Tinoshandisa yemhando michina kufanana mukuru-nokukurumidza azvikuya, shanu-akabatana machine centre, yemagetsi kubuda machine, CNC achiita zvokutemera uye azvikuya muchina, pfuti Drilling etc.
Tiri rinosundwa chinangwa kuisa vatengi vari chinoumba redu. Rokutengesa edu mamaneja vari ainyatsoziva pamwe Chirungu uye vanogona kutaura, zvakatsetseka pamwe vatengi vari Chirungu.
Izvi zvinopa vatengi pamwe kudekara kukurukura mururimi mutauro wavo nesu. It kunotibatsirawo kuti vaparidzire rakasiyana mutengi chawo nokushumira navo hubudirire nenzira nokudaro kuona runziro uye nenguva basa kuti vatengi mumutauro wavo nzvimbo.
CBPMM kwagara kambani mutengi-centric. Chinangwa chedu haina chete kutengesa chigadzirwa kune mutengi, asi kupa chinhu unmatched pashure okutengesa basa navo zvakare.
Tinotenda kuva uye kutarisira-refu ukama vatengi vedu vakaramba kuitira kuti kudzokera kwatiri nokuda kwavo epurasitiki zviumbe mukugadzira zvinodiwa.
Our pashure okutengesa chikwata inopa chiriporipocho uye kusanduka kushumira mutengi chero chigadzirwa kana ukama queries zvavakanga vave pashure vanotenga chigadzirwa yedu. Tinoedza kupa yakakwana uye misoro pashure-okutengesa mukushandira vatengi edu kuitira kuti vane runyararo zvakakwana pfungwa kana zvavanenge vatenga zvinhu zvedu.